तपाईको ब्लगको बारेमा कसैले पनि मतलब गर्दैन! | Martech Zone
बुधबार, मार्च 14, 2007 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
दैनिक आधारमा म मेरो ब्लगको बारेमा कम्तिमा एउटा रिबिंग पाउँदछु। म कुनै अपराध गर्दिन। म आफैँलाई लाग्छ, "यो ब्लगरको चीज हो, तपाईंले बुझ्नु हुन्न"।
सत्य यो हो कि म ब्लगरहरु भन्दा म अधिक सम्मान छ गैर ब्लगरहरु भन्दा। (कृपया नोट गर्नुहोस् कि मैले 'ठूलो' सम्मान भनें। मैले भनेको छैन कि म गैर ब्लगरलाई सम्मान गर्दिन।)
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्:
ब्लगरहरूले स्वतन्त्र रूपमा ज्ञान साझा गर्छन्।
ब्लगरहरूले परम्परागत सोचलाई चुनौती दिन्छन्।
ब्लगरहरू ज्ञान खोज्छन्।
ब्लगरहरू साहसी छन्, आफैंलाई ठूलो र द्रुत आलोचनाको लागि खोल्छन्।
ब्लगरहरू खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई तिनीहरूसँग जडान हुन्छ जुनसँग समाधान छ।
ब्लगरहरू आक्रामक रूपमा सत्यको पछि लाग्छन्।
ब्लगरहरूले उनीहरूको श्रोताको बारेमा ख्याल राख्छन्।
त्यसो भए तपाईले मसँग हाँस्न सक्नुहुन्छ र मेरो ब्लगमा हाँस्न सक्नुहुन्छ। मलाई मेरो मार्केटि and र टेक्नोलोजी क्यारियर मन पर्छ र मलाई आफूले सिकेका सबै चीजहरूको बारेमा ब्लगि love मनपर्छ। मसँग ज्ञान र प्रेमको लागि अतुलनीय खोजी छ जब म कुनै सानो समस्याको समाधान गर्ने जानकारीको त्यो सानो बडबडी भेट्छु वा पास गर्छु।
म मानिसहरुसंग चिन्तित छु जो आफ्नो शिल्पलाई माया गर्दैन। 5PM हिट हुने बित्तिकै, यी मानिसहरू सरलताका लागि बाहिर आउँछन्, बन्द गर्नुहोस् र घर जानुहोस्। संसार उनीहरूको वरिपरि परिवर्तन हुँदैछ, प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू संसारमा खोलिदै छन् तर उनीहरू इच्छुक छैनन्। तिनीहरू घर जत्तिकै जमीनमा प्वालहरू खन्न लागेका छन् र कसैले उनीहरूको फावड लिन्छन्। कसरी तपाइँ जिज्ञासा र प्रकाश स्विच जस्तै रचनात्मकता बन्द गर्न सक्नुहुन्छ?
व्यवस्थापन, नेतृत्व, विकास, ग्राफिक्स, प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस डिजाइन, उपयोगिता, मार्केटिंग - यी सबै क्यारियरहरू हुन् जसले सफलता निर्माण गर्न सिक्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो शिल्प वा तपाईंको उद्योगको बारेमा भावुक हुनुहुन्न भने, तपाईंसँग क्यारियर छैन - तपाईंसँग भर्खर एउटा जागिर छ। मँ व्यक्तिसंग काम गर्न चाहान्दिन कि काम छ। म मानिस परिवर्तन गर्न चाहने मानिससँग काम गर्न चाहन्छु।
मैले याद गरें कि नेतृत्व गर्न चाहने नेताहरूले तिनीहरूको चर्च, उनीहरूको घर र परिवारमा पनि अगुवाइ गर्दछन्। विकासकर्ताहरू जसले उनीहरूको शिल्प मन पराउँछन् खाली समयमै समाधानहरू विकास गर्छन्। ग्राफिक कलाकारहरूले शानदार वेबसाइटहरू बनाउँछन् र स्वतन्त्र कार्य गर्दछन्। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस डिजाइनरहरू अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दैछन् र भर्खरका प्रकाशनहरू पढिरहेका छन्। उपयोगिता विज्ञहरू लगातार नयाँ वैज्ञानिक खोजहरू लगातार पढाई र अवलोकन गर्दैछन्। मार्केटरहरू प्राय: आफ्ना साथीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायमा मद्दत गर्दैछन्। यो यी कुनै पनि व्यक्तिको लागि काम हैन, त्यो उनीहरूको प्रेम र आफ्नो जीवन हो।
त्यो परिवार वा खुशीबाट टाढा जान्छ भन्ने होइन। यी मानिसहरूसँग आफूले चाहेको सबै कुरा छ र तिनीहरू आफ्नो जीवनमा खुशी छन्। जब म ब्लगहरू पढ्छु, म जोश देख्न सक्छु कि यी ब्लगरहरूले उनीहरूको शिल्पमा राखेका छन् र म उनीहरूलाई सम्मान गर्दछु। म असहमत हुन सक्छ! तर म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु।
आज मैले एउटा नोट प्राप्त गरें मार्क क्युबन मैले उनको ब्लगमा राखेको टिप्पणीको जवाफमा। यो संक्षिप्त थियो - मैले उनको साइटमा पोष्ट गरेको टिप्पणीमा ठोस जवाफ। म यस केटालाई माया गर्न घृणा गर्दछु, तर म आफ्नो आँखाले आफ्नो पोष्टबाट हटाउन सक्दिन। ऊ आक्रामक छ, र कुटिल, र म शायद उनी भन्छ सबै संग सहमत छैन। तर म उसको उत्कट चाहना मन पराउँछु र मलाई लाग्छ कि त्यस्तो त्यस्तो व्यक्तिसँग काम गर्नु अविश्वसनीय हुनेछ।
ठीक छ, पर्याप्त दर्शन ... यो एक खुशी नोट मा अन्त गरौं। यदि मैले टीशर्ट डिजाइन गर्नु भएको भए, यस्तो देखिन्छ योः
टैग: ब्लगर्सब्लगिंगकसैले पनि मतलब गर्दैनतपाईको ब्लगको बारेमा कसैले पनि मतलब गर्दैन
मार्क्स 14, 2007 मा 10: 39 PM
राम्ररी भनिएको। म जागिर खोल्नका लागि आवेदनहरू सङ्कलन गर्ने बीचमा छु र मैले सोधेको पहिलो प्रश्नहरू मध्ये एउटा हो, "यो व्यक्तिसँग ब्लग वा वेबसाइट छ?" तिनीहरू जसले गर्छन् र उनीहरूले के गर्छन् त्यसको लागि कुनै प्रकारको जोश देखाउँछन् जुनसँग कुनै वेब उपस्थिति छैन।
तर, म धेरै पक्षपाती छु 🙂
मार्क्स 14, 2007 मा 11: 01 PM
कतिपयले नबुझे पनि शर्टमा यस्तो लेखिएको भए रमाइलो हुनेछ: -एप्पल लोगो यहाँ- + ब्लग!= गर्लफ्रेन्ड। 🙂
मार्क्स 15, 2007 मा 12: 47 PM
मार्स 15, 2007 मा 9: 22 एएम
डग, म तपाईंको ब्लगको ख्याल राख्छु।
मार्स 15, 2007 मा 9: 21 एएम
महान पोस्ट। तपाईले भनेको सबै कुरासँग म बढी सहमत हुन सक्दिन। अब मैले मेरो "काम" छोड्नु पर्छ।
स्टर्लिंग "चिप" क्याम्डेन
मार्क्स 15, 2007 मा 1: 36 PM
म तपाईको ब्लगको पनि ख्याल राख्छु, डग।
कहिलेकाहीँ मानिसहरू जो अन्यथा बौद्धिक र भावुक देखिने मात्र ब्लगिङ प्राप्त गर्दैनन्। म धैर्यपूर्वक तिनीहरूको उज्यालोको लागि पर्खिरहेको छु।
मार्क्स 15, 2007 मा 9: 19 PM
प्रोत्साहन को लागी धन्यवाद केटाहरु! मलाई तपाईको ब्लगहरू पनि मन पर्छ!
मार्स 16, 2007 मा 2: 15 एएम
म साँच्चै आशा गर्छु कि तपाईंले आफ्नो विचारको साथ टी-शर्ट बनाउनुहुन्छ (तपाईले क्याफेप्रेस वा स्प्रेडसर्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?)
र जब तपाईं यसमा हुनुहुन्छ, कृपया कुनै प्रेमी संस्करण पनि नदिनुहोस्!
म भन्न सक्छु कि यो शुद्ध प्रतिभा हो!
चाँडै नै पूर्ण-समय ब्लगर हुन, सबै सामग्री वर्डप्रेसमा सार्दै...
मार्स 16, 2007 मा 7: 08 एएम
भव्य सम्मान २ यू। मैले तपाईंको ब्लग पढें, जे होस् .. :-)
मार्स 17, 2007 मा 7: 48 एएम
डग, म ब्लग संसारमा नयाँ छु, तैपनि मैले छोटो समयमा यति धेरै जडान र खुला साझेदारी फेला पारेको छु कि म छक्क परें।
जोश को बारे मा महान अवलोकन।
मार्स 17, 2007 मा 9: 30 एएम
टिप्पणीको लागि धन्यवाद र ब्लगस्फेयरमा स्वागत छ! यो एक शानदार, विकसित प्रविधि हो। यसले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भनेर म पर्खन सक्दिन।